Ahoana ny fomba famokarana solika amin'ny atiny ara-tsosialy | Martech Zone
Ahoana ny fomba famokarana solika amin'ny atiny ara-tsosialy
Sabotsy 15 Novambra 2014 Zoma 14 Novambra 2014 Douglas Karr
Izahay dia tsy manandrana mamono tena fa izahay no loharanon-karena tsara indrindra amin'ny teknolojia marketing sy marketing manerana ny Internet. Manana fifandraisana tsara amin'ireo tranonkala hafa izahay ary mampiroborobo ireo mpiara-miasa aminay maro izay nanoratra atiny mahatalanjona nandritra ny taona maro. Tsy mijery ny tranonkala rehetra ho mpifaninana izahay fa kosa mihevitra azy ireo ho loharanom-pahalalana ho an'ny mpihaino anay. Rehefa manohy mampitombo ny tratrany isika, dia hajaina ho toy ny loharanom-pahalalana noho ny sandany entinay ho an'ny vondrom-piarahamoninay.
Mahazo tohatra sy fanairana amin'ny lohahevitra mahaliana mandritra ny tontolo andro izahay ary mamaky sy mamerina mijery azy rehetra tsara. Rehefa misy infographic tsara zaraina - eo isika. Rehefa misy manoratra atiny mahaliana mahaliana dia mampiroborobo izany amin'ny fiaraha-monina isika. Raha mbola manohy manome lanja izahay, dia hitohy hitombo ny fahafahantsika mahazo. Ity tratra ity dia mitohy mitondra laza antsika ary farany - fitarihana avy amin'ireo orinasa mila ny fanampiantsika. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny atiny voafantina dia paikady voalohany ho antsika.
Inona no atiny ateraky ny mpampiasa? UGC
Tsy ny B2B fotsiny anefa. Tetikasa tsy mampino ihany koa ny famoronana lanja ho an'ny mpanjifa. Ary na dia mihoatra noho ny lahatsoratra indostrialy sy matihanina aza, ny atiny ateraky ny mpampiasa anao dia tonga loharano tsy mampino hampiroborobo ny vokatrao sy ny serivisinao, manitatra ny tratranao, mahazo ny vaovao azonao ary mitazona mpanjifa lehibe. Ity atiny ity dia fantatra amin'ny hoe atiny ateraky ny mpampiasa na UGC.
Ny mpanjifa ankehitriny dia mamorona, mizara ary mandany sary, horonan-tsary ary lahatsoratra tsy tapaka. Ity atiny ara-tsosialy ity dia tsy vitan'ny hoe malaza fotsiny, fa manan-kery. Mihabetsaka hatrany ny mpanjifa mitodika amin'ny votoaty sosialy rehefa mandray fanapahan-kevitra mividy. Alohan'ny tsindrio atao anaty harona, mangataka hajia fankatoavana avy amin'ny namany sy ny namany izy ireo. Ity fironana ity dia miteraka fotoana lehibe ahafahan'ny marika mitondra fidiram-bola. Saingy toa tsy mahitsy foana ny lalana manomboka amin'ny selfie ka hatramin'ny fivarotana. Marika sy mpivarotra maro no mbola tsy manana paikady fitaterana varotra avy any UGC.
Vaovao infographic avy amin'ny OfferPop manoritra ireo dingana amin'ny fanangonana sy fitantanana ny atiny sosialy izay mivadika ho varotra.
Tags: Katalana goavanatolotraatiny sosialyugcatiny novokarin'ny mpampiasa
Inona ny fanamarinana mailaka? Ahoana no fiantraikany amin'ny famonjy?
Moa ve ny orinasanao manao an'ireto lesoka diso amin'ny media sosialy mahazatra ireto?